Sheeko YAAB leh oo ku aadan Ilkay Gundogan oo dhex martay goolhaye Bravo iyo Sanchez kulankii Man City iyo Arsenal!!!+MUUQAAL – Gool FM
Sheeko YAAB leh oo ku aadan Ilkay Gundogan oo dhex martay goolhaye Bravo iyo Sanchez kulankii Man City iyo Arsenal!!!+MUUQAAL
(London) 26 Dis 2016. Xiddigaha Man City ayaa kulankii dhawaa ay la yeesheen Arsenal soo wada xirtay maaliyada Gundogan maadaama uu laacibka soo gaaray dhaawac daran oo uu garoomada kaga maqnaanayo inta ka harsan xagaagan.
Haddaba sheeko yaab leh oo ku aadan Gundogan ayaa dhex martay goolhaye Claudio Bravo iyo dhaliyaha Arsenal ee Alexis Sanchez ka hor inta aysan bilaaban dheesha.
Inta ay xiddigaha labada koox u soo socdeen garoonka ayaa waxay sheeko dhex martay xiddigaha reer Chile ee Bravo iyo Sanchez, iyadoo weeraryahanka Gunners uu saaxiibkii waydiyay sababta ay u soo xirteen maaliyada No.8 iyo magaca Gundogan.
Sanchez ayaa mooday in Gundogan uu ka mid yahay kooxda yar-yarka Man City maadaama uusan garaneyn.
Haddaba sheekadooda ayaa ku bilaabatay sidan:
Sanchez: Maxaa dhacay? Waa kuma qofkaas?.
Bravo: Maalin dhaweyd ayaa dhaawac ka gaaray jilibka.
Sanchez: Waa kuma, waa kee qofka xirta No.8?.
Sanchez: Ma kooxdiina yar-yarka ayuu u ciyaaraa?.
Bravo: Maya, wuxuu u ciyaaraa xulka Qaranka Jarmalka.
Sanchez: Hahaha, waxba ma garanayo aniga.
Kualanka ayaa ku idlaaday 2-1, oo Arsenal ayaa goolka la hor martay balse qeybtii dambe ee dheesha ayaa loo sarifay goolkeedii.
“Suuro-gal ma ahan inaan Janaayo la soo saxiixano Van Dijk.”. Guardiola